Ny Virgin Atlantic dia mitady fiarovana amin'ny fatiantoka any Etazonia
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Virgin Atlantic dia mitady fiarovana amin'ny fatiantoka any Etazonia
Aogositra 5, 2020
Virgin Atlantic Airway dia nametraka fiarovana momba ny bankirompitra Toko 15 androany any amin'ny Distrikan'i atsimon'i New York.
Ny fiarovana ny toko faha-15 dia midika fa eo am-pamerenana amin'ny laoniny ny seranam-piaramanidina ary tsy hiala amin'ny asa aman-draharaha. Rehefa manafoana ny asa ny fikambanana dia eo no manomboka ny fiarovana ny toko faha-7.
Ny Virgin Atlantic dia miasa mba hahazoana drafitra famonjena 1.6 miliara dolara nambaran'ny kaompaniam-pitaterana tamin'ny volana Jolay. Ity no zotram-piaramanidina faharoa izay tsy maintsy nikirakira an'i Richard Branson noho ny fatiantoka nanao an'izany tany Virgin Australia tamin'ny faran'ny taona 2020. Ireo fametrahana bankirompitra roa ireo dia vokatry ny areti-mifindra COVID-19 coronavirus ka nahatonga ny tsy fisian'ny olona nanidina.
Rehefa nanao fangatahana antsoina hoe fitantanana (fatiantoka) i Virgin Atlantic, dia nilaza tamin'ny fitsarana London fa ho lany vola izy amin'ny volana manaraka raha tsy ekena ilay drafitra famonjena. Ny kaompaniam-pitaterana dia miasa mba hamerenana ny fifanakalozan-kevitra amin'ny ankamaroan'ny fiaramanidiny ary koa ny indram-bola naloany taloha ary tsy afaka mandoa tanteraka izao.
Tao amin'ny antontan-taratasin'ny fitsarana, nilaza ny mpisolovava ny kaompaniam-pitaterana fa "mila famerenana amin'ny laoniny bebe kokoa ny asa aman-draharaha mba hiantohana ny hoavin'ny orinasany ary hiantohana fa afaka mahatratra ny trosa sy ny takiana famatsiam-bola mihoatra ny tapaky ny volana septambra 2020 izao izy."
Ny Virgin Atlantic matetika dia mpandraharaha lavitra ary misy sidina eo anelanelan'ny UK sy ny US Flight naato tamin'ny volana aprily noho ny areti-mifindra, ary vao nanomboka ny sidina vao lasa ny sidina tamin'ny volana Jolay.
Branson dia nanolotra ny toeram-pialan-tsainy any Karaiba ho antoka antoka rehefa nanao antso tamin'ny governemanta britanika izy mba hahazo fanampiana ara-bola tamin'ny fiandohan'ny taona, saingy nolavina izany.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka (IATA) dia nanombatombana fa ho very 84 tapitrisa dolara amerikana amin'ity taona ity ny indostria noho ny COVID-19 ary ny fidiram-bola dia hidina antsasaky ny taona lasa.